Tontolo ambanivohitra : miara-miasa ny Indostria sy ny Fambolena | NewsMada
Tontolo ambanivohitra : miara-miasa ny Indostria sy ny Fambolena
Par Taratra sur 11/04/2018
Manamafy ny fiaraha-miasany ny minisitera roa: Indostria sy ny sehatra tsy miankina, miaraka amin’ny Fambolena sy fiompiana. Araka izany, nisy ny fanaovan-tsonia, omaly, teo amin’ny sekretera jeneraly minisitera roa, Rasamoelina Jean Jacques, avy amin’ny Indostria, sy Rakotobe Tovondriake, avy amin’ny Fambolena. Tsy vao voalohany ny fiaraha-miasa toy izao eo amin’ny roa tonta, hampivelarana ny indostria any amin’ny tontolo ambanivohitra. Hanatanterahana izany ny tetikasa Prosperer, ho fampandrosoana ny indostria sy ny fandraharahana momba ny fambolena sy ny fiompiana, antoky ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena.
Koa manentana ireo kaoperativa ny minisiteran’ny Indostria amin’ny maha mpiahy azy ny sehatra tsy miankina. Efa nahitam-bokatra izay fanomezan-toerana ny sehatra tsy miankina izay, ary andrasana hampitombo ny vokatra sy hanatsara ny kalitao, mamaly ny filàn’ireo indostria.
Laharam-pahamehana ao anatin’ny « Fisandratana 2030 », ny indostria sy ny fandraharahana momba ny fambolena sy ny fiompiana. Voarakitra amin’ny fanaovan-tsonia eo amin’ny minisitera roa tonta izany, tanterahina amin’ny tetikasa Prosperer. Nanamarika ny maha zava-dehibe io fanaovan-tsonia io ny mpanolotsaina ao amin’ny Prosperer, Ratsimandresy Vladimir Barihoda. Mitohy, noho izany, ity tetikasa ity any ambanivohitra, hampitomboana ny ezaka efa natao sy hahitana tsenam-barotra lehibe.
Tsy misy tsy mahita isika fa tratra aoriana lavitra mitarika fahantran’ny mponina maro ny tontolo any ambanivohitra. Koa antenaina hitondra vokatra tsara ny tetikasa toy izao, hisy tokoa ny tena fanatanterahana azy.
Les indésirables du 02 Mars 2021 02/03/2021
Taekwondo-Analamanga: nahomby ny fifaninanana 01/03/2021
Lomano-Mada 25 m: nanamontsana « record national » i Holy Antsa 01/03/2021
Rap gasy – “Ray lasy”: nahafa-po ny rehetra ny seho 01/03/2021
Nafana tanteraka ny AFT: nahatafita hafatra ny « Vazo miteny » 01/03/2021